Wasiir Fiqi “Waxaan garan weynay xiriirka u dhaxeeya Al-Shabaab iyo Qoor qoor” | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Wasiir Fiqi “Waxaan garan weynay xiriirka u dhaxeeya Al-Shabaab iyo Qoor qoor”
Wasiir Fiqi “Waxaan garan weynay xiriirka u dhaxeeya Al-Shabaab iyo Qoor qoor”
Wasiirkii hore ee wasaaradda Amniga ee maamulka goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmad Macalin Fiqi ayaa ku eedeeyay Madaxweynaha Galmudug in uu abaabulaayo dagaallo ka dhan ah dadka shacabka ah ee kunool Magaalada Guriceel.
Waxaa uu sheegay wasiir Fiqi in aan marnaba la aqbali doonin in Madaxweynaha uu weerarro magaalooyin nabdoon oo ay ku sugan yihiin culimada Ahlusunna.
“Weerarka Guriceel lagu qaadayo waxa uu la mid yahay kii la doonayay in lagu qaado Saadaq John oo Shirkole degganaa la rabay in lagu soo qabto iyo kii marinaayo ee la doonayay in lagu sumcad dilo Madaxwaynihii hore ee dalka, Reer Guriceel waxa aan kula dardaarmayaa in ay ilaalsadaan culimadooda”
“Dagaalka Guriceel waa Mashruuc doorasho oo degaankaas galay Guriceel ma joogaan cadaw” Ayuu yiri Wasiir Fiqi.
Waxaa kaloo uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ciidamo xoog leh ku daabushay magaalada Dhuusamareeb si ahlusunna weerar loogu qaado balse markii ay dagaalka kula jireen Shabaab in ay si weyn u diiday in ciidamo la keeno.
Previous articleDHAGEYSO:Gabadh ku nool xeryaha qaxootiga Dadaab oo shaqo abuur u samaysay dumar kale
Next articleAtwoli oo loo doortay inuu hoggaamiyo qorshayaasha dowladda ee gobolka galbeedka dalka